I-Xiaomi Mi 9 Lite: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa | I-Androidsis
Kwiveki ephelileyo kwaqinisekiswa ukuba iXiaomi Mi 9 Lite yayiza ikhona namhlanje ngoSeptemba 16. Uphawu lwaseTshayina lusishiya nefowuni yalo entsha ngaphakathi kwinqanaba eliphakathi. Kwasekukhoyo ukuba le modeli yayiza kubakho Inguqulelo yamazwe aphesheya yeCC9 ukuba uphawu lwenziwe kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo. Oku kunjalo, ngokuyinxenye, kuba kukho utshintsho oluthile.
IXiaomi Mi 9 Lite inezinto ezininzi ezifanayo kunye nenye ifowuni eyaziswa kwiiveki ezidlulileyo. Nangona iyimodeli eyahlukileyo ngaxeshanye. Uphawu lwaseTshayina luyaqhubeka ukuvumela olu luhlu lukhule kunye neemodeli ezintsha. Sikuxelela yonke into malunga nefowuni engezantsi.
Uyilo luhlala ngaphandle kotshintsho oluninzi xa kuthelekiswa neCC9. Inotshi ngohlobo lwethontsi lamanzi kwiscreen sayo kwaye ngasemva sifumana ikhamera kathathu. Njengoko iphindaphindeka ngakumbi, isivamvo somnwe esibekwe phantsi kwescreen secebo.
1 Ukucaciswa kweXiaomi Mi 9 Lite
Ukucaciswa kweXiaomi Mi 9 Lite
IXiaomi Mi 9 Lite idibana nento esiyibonayo kakhulu kuluhlu lwaphakathi lweprimiyamu yangoku. Isebenzisa iprosesa yakudala kweli candelo lentengiso kwaye ijolise kwiikhamera zayo, njengoko sele ixhaphakile. Ngokubanzi, inikwa njengokhetho olusemgangathweni kule marike. Ukongeza, njengesiqhelo kwibrendi yaseTshayina, iya kufika ngexabiso elifikelelekayo, nto leyo ngokuqinisekileyo evusa umdla omkhulu phakathi kwabasebenzisi. Oku kukucaciswa kwayo ngokupheleleyo:
ISIKHUMBUZO I-6.39-intshi ye-AMOLED enesisombululo esipheleleyo se-2.340 x 1.080 pixels kunye ne-19.5: 9 ratio (430 nits)
ISithuba sangaphakathi esigciniweyo 64 / 128 GB
IINKCUKACHA Ngasemva: I-48 MP (f / 1.79) + i-8 MP ye-118 yeedigri ebanzi ye-angle + 2 MP (f / 2.4) ye-bokeh / Ngaphambili: I-32 MP ene-AI kunye nePixel Binning
IBATTERI I-4.030 mAh ene-18 W yokutshaja ngokukhawuleza
INKQUBO YOKWENZA I-Android 9 Pie ene-MIUI 10
UQHAGAMSHELWANO I-Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac yeebhendi ezimbini / iBluetooth 5.0 / A-GPS / GLONASS / NFC
IIMPAWU ZE-OTRAS Iscreen seFingerprint Reader / Ukwamkelwa kobuso kwi-USB-C
Ubungakanani kunye nobunzima 156.8 x 74.5 x 8.67 millimeters kunye ne-179 gram
Ngaphandle kwamathandabuzo, ikhamera yangaphambili yenye yezona zinto zibalaseleyo kule Xiaomi Mi 9 Lite. Uphawu lwaseTshayina lusebenzisa inzwa ye-MP eyi-32 kwifowuni, eya kukuvumela ukuba uthathe iiselfie ezilungileyo kakhulu ngefowuni ngalo lonke ixesha. Inzwa yesithathu isilindele ngasemva kwefowuni, kunye ne-sensor ye-MP eyi-48, esele ixhaphake kakhulu kwiifowuni zangoku kwimarike. Zonke iikhamera kwifowuni zixhotyiswe ngobukrelekrele bokufakelwa.
Inzwa yeminwe ibekwe phantsi kwescreen, into esiyiqhela ngakumbi nangakumbi. Inkampani isishiya nebhetri elungileyo kwifowuni, amandla e-4.030 mAh, adibeneyo kunye neprosesa kunye nokusetyenziswa kwePie ye-Android kufuneka inike inkululeko. Ukongeza, iza kunye nokutshaja okukhawulezayo, eyenye into ebalulekileyo kuluhlu oluphakathi lweprimiyamu ye-Android.
Uhlobo luye lwaqinisekisa ifowuni izokwaziswa kule nyanga, ubuncinci kwiinguqulelo zayo ezimbini. Kuba iXiaomi Mi 9 Lite isungulwe kwiinguqulelo ezimbini ngokwe-RAM kunye nokugcinwa. Ke abasebenzisi baya kuba nakho ukukhetha uhlobo lwale fowuni olucinga ukuba lunomdla kakhulu kubo.
Imodeli yefowuni engu-6/64 GB iya kukhutshwa ngokusesikweni nge-30 kaSeptemba. Ukufika eSpain ngexabiso lama-319 euros, njengoko iqinisekisiwe yinkampani uqobo. Ngelixa inguqulelo yeXiaomi Mi 9 Lite ene6 / 128 GB iyakwaziswa ngenyanga yonke ka-Okthobha, ngaphandle komhla othile okwangoku, ngexabiso lama-349 euros.
Abo banomdla kwesi sixhobo ungayithenga ngemibala emithathu: I-Aurora Blue, Onyx Mnyama kunye nePearl White. Yimibala esiyibonileyo kwiifoto zefowuni. Zizo kuphela ezinokufumaneka ezivenkileni. Singayithenga kwiindawo eziqhelekileyo zentengiso yohlobo lwaseTshayina.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IXiaomi Mi 9 Lite yenziwe ngokusemthethweni
I-Outlook ifumana inkxaso yePOP3 kwiminyaka engama-30 emva kokuyilwa kwayo
I-LG yinkampani ebonelela ngeepaneli ze-OLED kuthotho lweHuawei's Mate 30